EyeKhala 21, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Eli nqaku lijonga kwimithetho emihlanu ekufuneka unamathele kuyo ukuze wandise inzuzo xa uthengisa ikhaya lakho.
1. Thengisa indlu yakho ngokwakho
Kukho umahluko okhulayo kwimarike yendawo ethengisa izindlu phakathi kwabanini bamakhaya abacebisa ukuba kusetyenziswe abathengisi bezindlu ukuthengisa amakhaya abo kunye nalawo avumelayo bathengisa amakhaya abo. Kubanini bamakhaya abajonge ukukhulisa inzuzo ekuthengisweni kwekhaya labo, besebenzisa i-realtor baya kunciphisa inzuzo abaza kuba nayo esandleni ekupheleni kosuku. Uninzi lwabathengisi bathatha isabelo senzuzo njengemirhumo yabo kunye nokuthintela ukubanakho komnini khaya ukukhulisa inzuzo kwintengiso.
2. Fumana iKhaya lakhoLungisiwe kwaye iiNdonga ziye zalungiswa
Kwilizwe elinamachibi amaninzi njengoko i-Australia isenza, kunzima ukugcina umphandle wendlu ukwimeko yeprinta. Kwiimeko ezininzi ukupeyinta kudonga lwangaphandle kwekhaya kunye nemeko yoxinzelelo ezindongeni inokwenza ikhaya libonakale lidala kunangaphambili. Oku kunciphisa ixabiso umthengi onokuzimisele ukulihlawula.
Ukwandisa inzuzo yokuthengisa, umnini kufuneka enze utyalomali oluncinci ukuze indlu ilungiswe ngaphandle nangaphandle kodonga lwayo. Kwilizwe lokuthengiswa kwezindlu, ukuvela okokuqala kuhlala kungumboniso wokugqibela, kungoko kufuneka ukuba ube nefuthe.
3. Gxila ekhitshini kunye kwigumbi lokuhlambela
Iikhitshi kunye negumbi lokuhlambela zezi I-Achilles isithende samakhaya. Zenye zezinto ezimbalwa ezinomdla kakhulu kubathengi. Ngokuqhelekileyo xa kuncinci ukwahlula phakathi kwezindlu, abathengi benza izigqibo zabo ngokubhekisele kwimbono yabo ekhitshini nakwigumbi lokuhlambela lamakhaya. Ikhitshi elungiswa ngokutsha okanye igumbi lokuhlambela elihlaziyiweyo longeza ixabiso kwindlu enokukhutshwa ngendlela yengeniso evela kwintengiso yekhaya lakho ngokwenyusa ixabiso layo lokuthengisa.
4. Ungaze ubonise uMthengi ukuba unqwenela ukuthengisa
Abanini bamakhaya ngamanye amaxesha banokunqwenela ukuthengisa amakhaya abo ukunyusa imali yokusebenzisa enye indawo. Ngaphandle kokungxamiseka komba, ukuba bafuna ukwandisa inzuzo ekuthengisweni kwendlu, kufuneka baqhubeke nokuzithemba kubo. Yisixhobo esikhulayo sokuxoxisana esidala, umntu wokuqala ukuqhawula ilahleko, ukuba abathengi banakho ukuziva ukuphelelwa lithemba abayi kukuvumela ukuba wenze inzuzo enkulu kwipropathi yakho.
Kutheni uzimisele ukuhlawula imali eyongezelelweyo kwezi venkile ziphezulu zoluhlobo olunye lweemveliso ezikhoyo kwixabiso eliphantsi? Kungenxa yendlela abaziswa ngayo, inkcazo yiyo yonke into xa isiza kwixabiso lekhaya lakho. Ukuba abaninimzi bayakwazi khanyisa ikhaya labo ngokufakwa okongeziweyo kokukhanya, ukutsala umdla wamakhaya abo, abathengi baya kuvuma ukuhlawula ii-buck ezongeziweyo okoko ikhaya libhenela kubo.
Le yeminye yemithetho enokujonga ukuthengiswa kwamakhaya abo nokwandisa inzuzo yabo abanokuyilandela.
okwenyaniWW Julayi 21, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuthengisa izindlu nomhlaba noqhotyosho Intengiso yePropathi, Ukuthengisa ngepropathi, Intengiso yeNtengiso yePropathi, ukuthengisa izindlu nomhlaba, thengisa indlu yakho, thengisa indlu yakho ngokwakho, ukuthengisa iipropathi, Ukuthengisa izindlu nomhlaba, ukuthengisa ikhaya lakho. Bookmark le Permalink.
Julayi 21, 2016 Iimfihlo zokuthengisa ipropathi yakho yokuqeshisa Ukuba ucinga ngokuthengisa ipropathi yakho ekuhlalwa kuyo ngabaqeshi, ufuna ukulungiswa, ke ukuthengisa kuya kuhamba ngokusemgangathweni. Umqashi kwipropathi obeka kuyo kwintengiso unokwenza kube lula ukuba bayazi ukuba zithini na izicwangciso zakho, ezinokuthi zenzeke, kwaye ukuba banenkuthazo yokunceda kwinkqubo. Ufuna ukuba babe kwicala lakho, kwaye awufuni ukuba banomsindo. Uninzi lwabaqeshi lubonakele kwaye bayayiqonda imeko, kodwa hlukana nokukhumbula imeko yabo […] exhonyiweyo Ukuthengisa izindlu nomhlaba
Agasti 23, 2016 Yongeza ukubukeka kwakho kweCurb ngoKugcina i-Limestone Yenza umbono wokuqala kubantu abaza kuthengisela izixhobo zokuthenga abathengi, umgangatho ophezulu kunye nokunxitywa kanzima ngamatye aqengqelekayo ukunceda ukunyusa ukubambisa kwepropathi yakho. Ukuthengisa indlu yakho kwimarike yabathengi kunokuba ngamava anzima, ngoko ke ufuna ukwenza konke ongakwenza ukwenza ikhaya lakho libonakale kwesihlwele. Ngophando olubonisa ukuba kuthatha abathengi abanokubakho ngaphezulu kwemizuzwana ezisibhozo ukugqiba ukuba bayayithanda okanye abayithandi na indlu, okokuqala […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya, Ukuthengisa izindlu nomhlaba